Maalinta: Diseembar 1, 2019
Kayseri Erciyes waxaa lagu soo kordhiyey khubarada dalxiiska ee Thailand, oo loo go'aamiyay inay suuq u tahay baaxadda dalxiiska cusub iyo istiraatiijiyada dhiirrigelinta. Shirka dhiirrigelinta Kayseri-Erciyes ayaa lagu qabtay Bangkok, magaalo madaxda Thailand iyadoo ay ku timid hindisaha Agaasimaha Duullimaadyada ee Shirkadda Turkish Airlines Kayseri, [More ...]
taas oo uu leeyahay NATO ayaa raxan gujis labaad ee ugu weyn dalka Turkiga, Villarreal National khayraadka maxalliga ah iyo kuwa qaranka ee Navy Turkish ee laakiin waxaa lagu soo saari doonaa (ka qodaa) Project rasmi ah u bilaabay. Nooca cusub ee Submarine Project [More ...]
Aqoon-isweydaarsiga Caalamiga ah ee Dhulgariirrada oo ay soo abaabushay Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul si Istanbul looga dhigo magaalo u adkaysata musiibada ayaa bilaabmaysa berri. Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul Ekrem İmamoğlu ayaa khudbad furitaanka ka jeedin doona aqoon isweydaarsiga. [More ...]
Warbixinta Qiimaynta Saamaynta Deegaanka (EIA) ayaa la diyaariyey ka dib Kulankii Guddiga Dib u Eegista iyo Qiimeynta (CEC) ee Mashruuca Kanal Istanbul ayaa lagu qabtay Ankara. TEMA Foundation ayaa ka qaybgashay shirkii IAC halkaas oo warbixintii EIA lagu qiimeeyay lana xidhiidha mashruuca Kanal Istanbul [More ...]
Hirgelinta Uzungöl Teleferic
Ganacsade Sukru Fettahoglu, mashruuca gawaarida ee fiilada korontada ee Uzungol ayaa hakad la galiyay muddo dheer. Fettehoğlu wuxuu bilaabay hawshii qodista, wuxuu sheegay in goobtii timirta la furay. Fettahoğlu, "haddii Alle idmo, laba ka mid ah saddexda saldhig ayaa furi doona bisha Luulyo." [More ...]
EIA muhiim uma ahan Kadıköy Sultanbeyli Metro Dhismaha ayaa Bilaabmaya
EIA muhiim uma ahan Kadıköy Sultanbeyli Metro Dhismaha ayaa Bilaabmaya; Qiimaynta Saamaynta Deegaanka (EIA) waxaa loo baahan yahay khadka 18.4-ka dheer ee Kadıköy-Sultanbeyli Metro Line, mashruucan oo ay soo diyaarisay Dowlada Hoose ee Magaaladda Istanbul (IMM) [More ...]
Aaladaha raajada, oo aan lagu isticmaali karin iridaha dhulka hoostiisa mara ee Ankara, ayaa shaqeynayay ilaa usbuucii hore. Inta lagu gudajiro saacadaha ugu badan ee rakaabka iyo taraafikada gawaarida iyadoo la shaqeynayo aaladda, talaabooyinka amniga ee dhulka hoostiisa [More ...]
Damiintii la siiyay shirkadda ka hawlgasha buundada Osmangazi, jeebka wareejinta iyo kan u dambeeya ayaa dab socda. Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, ayaa hadda bixinaya [More ...]
U yeerid is-diiwaangelin adiga oo maraya Shilka "Tareenka Tareenka"; Xisbiga Jamhuuriga (CHP), oo makarafoonka ka helay gorgortanka miisaaniyada 2020 ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha ee TGNA Plan and Budget Commission, Eeg Ilhami Xogtiisa oo Dhan [More ...]